तेमाल गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा सम्पन्न – Radio Roshi
जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाको आठौँ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध तेमालको आधार भन्ने मुल नाराका साथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलाम सिं तामाङको अध्यक्षतामा गाउँसभा सम्पन्न भएको हो । शुक्रबार सम्पन्न गाउँ सभाबाट आर्थिक, सामाजिक र कानुनी पक्षहरुलाई समेटेर तयार पारिएको संसोधित नीतिगत निर्णयहरुलाई कार्यन्वयन गर्न सभामा प्रस्तुत गरीएको थियो ।
स्वागत मनतव्य राख्दै गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष ज्ञान बाहदुर तामाङले गाउँसभा सम्पन्नताको शुभकामना दिए । पालिकामा र वडामा व्यवस्था राम्रो हुन जनप्रतिनिधिहरु साथै कर्मचारी, पत्रकारहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने बताए ।
सभाध्यक्ष सलाम सिं तामाङले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र संसोधित प्रतिवेधन पढेर सभा समक्ष प्रस्तुत गरेकोमा गाउँसभाका सदस्यहरुले सर्वसंहमतिमा पारित गरेको छन् । सभामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले संसोधित नीति तथा कर्यक्रमको प्रस्ताव पेस गरेकी थिईन् ।
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लक्ष्मण कुँईकेलले गाउँसभामा संचालन गरेका थिए । कार्यक्रममा गाउँपालिकाको ९ वडा मध्ये वडा नं. ४ का अध्यक्ष आस्पुर लामा र वडा नं. ५ का अध्यक्ष प्रविन कुमार मोक्तान अनुपस्थित रहे भने अन्य ७ वडाका अध्यक्षहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
ल्होछारमा ३ दिन बिदा:
गाउँसभाका सभाध्यक्ष सलाम सिं तामाङले तामाङ समुदायको राष्ट्रिय साँस्कृतिक पर्व सोनाम ल्होछार–२८५७ (लाङ ल्हो)को अवसरमा गाउँपालिकाले ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए । गत पुष १७ गतेको कार्यपालिका बैठकले ३ दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।
उनका अनुसार माघ २८, २९ र ३० गते सार्वनिक विदा दिने निर्णय भएको छ । यस अघि पनि गाउँपालिकाले ३ दिन सार्वजनिक विदा दिंदै आएको छ । तेमालमा करिब ९० प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । सभाध्यक्ष तामाङले हाम्रो सांस्कृतिक पर्व टुँडिखेलमा नभई आफ्नै गाउँठाउँमा मनाउन पनि अपिल गरे ।